တကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှု ရှိမရှိ ချစ်သူသိ[10 Things She Secretly Notices About Your Hygiene]
လူထုကြား စကားပြောစွမ်းရည်မြင့်မာရေး သင်တန်းတစ်ခုကို Bright Pride အဖွဲ့ကနေ ရွှေဘိုမြို့မှာ ပြုလုပ်ခဲ့
Bi-Monthly Magazines (Print)
Monthly Online Magazines
ယခုတစ်ပတ်တွင် ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေအခန်း (၃) ပြစ်ဒဏ်များနှင့် (၄) ကင်းလွတ်ရမြဲအချက်များအကြောင်းတို့ကို ရှင်းပြထားပါသည်။ တရားရုံးတွင် ကိုးကားသုံးစွဲမည်ဆိုပါက မူရင်းဥပဒေအတိုင်းသာ သုံးစွဲရပါမည်။ လူတိုင်းဥပဒေပညာကို နားလည်နိုင်ကြပြီး ဥပဒေနှင့်အညီနေထိုင်သည့် လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းကို တည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေ။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေအခန်း (၃) ပြစ်ဒဏ်များ မေး
June 7, 2018 Soe Myat Thu 0
သူ့ခြေလှမ်းတို့က လုပ်လီလုပ်လဲ့။ မကြွချင်ကြွချင် လှမ်းနေရတဲ့ ခြေလှမ်းတွေကို မနိုင်မနင်း လှမ်းနေရသည်။ နောက်ကိုတစ်ချက် ငဲ့စောင်းကြည့်လိုက်ချိန်မှာ သူ့ရင်ထဲ ခါးသက်သွားသလို ခံစားလိုက်ရသည်။ သူ့ခြေလှမ်းတွေက အလိုလို ခပ်စိတ်စိတ်လေး လှမ်းဖြစ်သွားရသည်။ ရုတ်တရက် မိုးက သည်းထန်စွာရွာချလိုက်ချိန်မှာတော့ စူးရှတစ်ကိုယ်လုံး
Long StoryView All
“ ဗျာ… ကို… ကို ဘယ်လို ပြောလိုက်တယ်…” ကန်တော်ကြီး ရေပြင်ကို မတ်တပ်ရပ်ရင်း ငေးမောနေတဲ့ ကိုက တည်ငြိမ်လွန်းနေတာမို့ သုတကို (ကို)ဆိုသော အံ့ဘုန်းမြတ်ကို မယုံကြည်နိုင်ခြင်းများ ရောယှက်လျှက် ထိုင်ခုံလေးမှာထိုင်ရင်း မော့်ကြည့်နေမိသောအခါ ကိုက
Beauty & HealthView All
ကိုယ်က အသေးအဖွဲကိစ္စလေးပါဆိုပြီး မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်ထားပေမယ့် ကိုယ့်ချစ်သူက မမြင်ဘူး၊ သတိမမူမိဘူးလို့ မဆိုနိုင်ဘူးနော်။စာဖတ်သူကော၊ စာရေးသူ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် များသောအားဖြင့် ခြေသည်းတွေ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ညှပ်၊ မျက်ခုံးမွှေးနှစ်ခုကို ဆက်နေတဲ့အမွှေးတွေ(Uni-brow) တွေကို
ရွှီ… ရွှီ… အကျီအဖြူရောင်၊ ဘောင်းဘီအဖြူရောင် မြန်မာဘောလုံးအသင်း ဝတ်စုံဝတ်ထားပြီး ဘောလုံးကွင်းထဲမှာ ခရာသံတတွတ်တွတ်နဲ့ ကစားသမားတွေကို အော်ဟစ်ပြောဆိုကာ ဘောလုံး အခြေခံပညာတွေကို သင်ကြားပေးနေသူ တစ်ယောက်… တကယ်တော့ သူဟာ Transgender အမျိုးသားတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ အဖေအမေ
မြန်မာ့ရိုးရာ မဟာသင်္ကြန်ကာလအတွင်းမှာ သက်တန့်လေးတွေနဲ့ သူတို့အစီအစဉ်….
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရွှေဘိုမြို့မှာ Bright Pride Myanmar Lesbian အဖွဲ့ကဦးစီးပြီး LGBT/SOGIE အကြောင်း အသိအမြင်ဖွင့်နှင့် စကားပြောစွမ်းရည် မြင့်မားရေး (Public Speaking Skills) သင်တန်းကို (၂) ရက်တာ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
June 19, 2018 Kyal Sin Lin 0
June 11, 2018 Kyal Sin Lin 0
ယခုလထုတ် မဂ္ဂဇင်းရဲ့ In & Out ကဏ္ဍအတွက် ရွေးချယ်ထားသူကတော့ ရုပ်ရှင်နှင့် ဗွီဒီယိုသရုပ်ဆောင် ဆုပန်ထွာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဆုပန်ထွာဟာ “မကြီးစန်းနဲ့ သူ၏ချစ်သူများ” ဇာတ်ကားမှာလည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ဖူးသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆုပန်ထွာရဲ့
နောက်ထပ် တင်ဆက်ပေးမယ့် ဇာတ်ကားလေးကတော့ အလွမ်းအကြမ်းလေးတွေနဲ့ ခပ်သွက်သွက်လေးရှိမယ့် ဇာတ်ကားလေးကို ရွေးထားပါတယ်။ ဒီကားလေးဟာလည်း ၂၀၀၄ ခုနှစ်ကတည်း ထုတ်ခဲ့တာဆိုတော့ အတော်ကြာပြီလို့ ဆိုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဟောင်းပေမယ့်လည်း ကောင်းနေဆဲ ဇာတ်ကားလေးပဲ ဖြစ်မှာပါလို့ ဆိုချင်ပါတယ်။
AIDS Alex Aung Australia beauty Behaviorism Born christian Civic Engagement Depression Dr Phyo Thi Ha equality gay gender identity health HIV homosexuality human rights hygiene IDAHOT India Indonesia islam Kyaw Moe Thant Kyaw Swar LGBT LGBT Rights lifestyle malaysia Mandalay Min Lulin movie Myanmar Myat Maw Oo Naung Cho Thit Oscar pride month public health Same sex Marriage Section 377 sex education Sexual Transmitted Diseases SOGIE sport Transgender Wyne
Copyright © 2018 Colors Rainbow. All rights reserved.